Nagu saabsan - Sinopulse tubbo Factory Co., Ltd.
Tuubada Xaaladda Hawada
Mashiinka Mashiinka Tuubada
Mashiinka Goynta tubbo
Mashiinka Skiving tubbo
Isku xidhka degdega ah ee Haydarooliga
Nalalka aan xarka lahayn ee Camlock
Tubbo PVC Warshadaha
Tubbada Garden PVC
Air kombaresarada tubbo
Tuubada Saliida Shidaalka
Gas tubbo Gasoline
Cadaadis Sare Tuubada Jet-tuubada
Jack Hammer tubbo
Nuugista Oo tubada Dheecaan
Sinopulse tubbo Factory Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2001, waxay leedahay in ka badan 15 sano wax soo saar iyo khibrad soo saar. Warshaddu waxay ku taalaa Park Development Industrial Park, magaalada Handan, Gobolka Hebei, Shiinaha, oo dhererkeedu yahay 50 hektar, waxay leedahay aqoon isweydaarsi caag ah, aqoon isweydaarsi jilicsan oo jilicsan, aqoon isweydaarsi adag, aqoon isweydaarsi aan mandrill ahayn, dhismaha xafiiska iyo tijaabooyin kale oo kaabayaal ah oo ka badan 20,000 mitir oo laba jibbaaran .
Tayada Ayaa Isbadal Samaysa
Waxaan nafteena u hurnay bixinta alaab tayo fiican leh, caymis iibka kadib lagu kalsoon yahay iyo Model iskaashi raaxo leh
Sinopulse waa soo saaraha ugu xirfada badan ee tuubada haydarooliga, tuubada caaga warshadaha iyo qalabka tuubada. Iyada oo dhowr ah wax soo saar horumarsan oo silig xarig leh tuubada xargaha, xariiqda wax soo saarka horumarsan ee siligga siligga siligga ah ee tuubbada cadaadiska sare leh, khadka waxsoosaarka horumarsan ee dharka ayaa la xoojiyay. Badeecadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah tuubada Haydarooliga, tuubada nadiifinta cadaadiska sare, tuubada hawada lagu cadaadiyo, tuubada biyaha, tubada oksijiinta, tuubada acetylene, tuubada alxanka laba-laaban, tuubada saliida, tuubada nuugista iwm.
Dakhliga Iibka15 SANADOOD Laga soo bilaabo sanadkii 2001 100+, Maya Shaqaale 20,000, Dhismaha Warshadda Meter Square, 120,000,000 USD
Soosaarka SINOPULSE wuxuu qaataa qalabka buuxa ee qalabka baaritaanka shaybaarka: silig bir ah / Qalabka Rubber ee tijaabada xoogga; Baadhitaanka xarkaha siligga iyo birta; Tijaabada gabowga duubista; Tijaabada tuubada cadaadiska; Tijaabada tubada Hay'adda Xakamaynta Tayada oo Adag;
Waxaan helnay Shahaadada MSHA iyo ISO, oo bixin kara shaqaalaha ugu saaxiibtinimada badan, ugu khibrada iyo aqoonta badan ganacsiga halka aan ku siineyno alaab tayo la isku haleyn karo oo lagu kalsoonaan karo sicirka tartanka.
Dhamaan dadka Sinopulse waxay si firfircoon ugu lug leeyihiin ganacsiga, waxayna ku raaxeystaan ​​la shaqeynta dhamaan saliideheena, beeraha, gaadiidka, dhismaha, macdanta, iyo macaamiisha keymaha. Sinopulse waxay leedahay shabakad ballaadhan oo loo qaybiyo oo alaab u siisa ganacsiyada yaryar iyo shirkadaha waaweyn.
Carwadii 127-aad ee Kanton waxaa lagu qaban doonaa Online ...
Hada Naga Soo wac: 0086-15803319351